ပုံမှန်ထက် အအိပ်နည်းသူများတွင်ကော အအိပ်များသူများတွင်ပါ နှလုံးရောဂါဖြစ်နှုန်း မြင့်မားကြောင်း တွေ့ရှိ | Page 1115 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
၈.၁၂.၂ဝ၁၆ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
1. ဦးနှောက်သည် အလေးချိန်မည်မျှရှိသနည်း။
လူဦးနှောက်သည် အကြမ်းဖျဉ်း3ပေါင် (သို့) 1.5 ကီလိုဂရမ်လေးပါတယ်။
2. အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဦး၏ ဦးနှောက်အရွယ်အစားသည် မည်မျှရှိသနည်း။
ရေနဲ့ကြာကြာထိတွေ့တဲ့အခါမှာ အရေပြားတွေဘာကြောင့် ရှုံ့တွသွားသလဲ?
ရေကြာကြာချိုးတဲ့အခါ (သို့) ရေချိုးကန်ထဲမှာ အကြာကြီးရေစိမ်တဲ့အခါမှာ လက်နဲ့ခြေထောက် အရေပြားတွေ ရှုံ့တွနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒါကပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရသလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အရေပြားအပေါ်ဆုံးအလွှာကို မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အဆီဖုလေးတွေနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ ဒီအဆီဖု...